नियमित ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज पनि १०.२८ अंकले घटेर एक हजार ३३८ बिन्दुमा झरेको छ ।
साताभर नेप्से १७ अंकले बढ्यो
काठमाडौं गएको साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १८१ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार २९३१९ कारोबारबाट दुई अर्ब १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरका ४८ लाख १२ हजार सात सय ७० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २७.७६ प्रतिशत बढी हो ।
काठमाडौं यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १७६ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार १८४८३ कारोबारबाट एक अर्ब ५६ करोड ७० लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरका ३२ लाख ४४ हजार पाँच सय कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ६६.६३ प्रतिशत कम हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल प्रचलित अभ्यासभन्दा झन्झटिलो कामलाई सेमीअनलाइनको नाम दिएर प्रयोगमा ल्याएपछि लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । बोर्डले ब्रोकरलाई अनलाइन अर्डर दिने विषयलाइ स्पष्ट नपर्दा बजारमा चलखेलसमेत बढेको छ । बोर्डले अनलाइन कारोबार प्रणाली र हाल सुरु भएको सिस्टममा एपीआईबाहेक केही फरक नभएको जनाएको छ ।
साताभर नेप्से ५४ अंकले बढ्यो
यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १८१ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार २७६३३ कारोबारबाट एक अर्ब ६९ करोड ७७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरका ५४ लाख ५० हजार २ सय ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् ।
भिवोरलाई ३ कम्पनीको सेयर कारोबारको जिम्मा
अपि, अरुण र कावेली जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो सेयर रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी भिवोर क्यापिटल लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
निरन्तर घटेको सेयर बजारमा मुलुकको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी श्वेतपत्र आएपछि सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ता उत्साहित हुने अवस्था देखिँदैन । श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई सतही भनेर ‘सम्बोधनका लागिमात्र सम्बोधन’ गरेका छन् । सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको हुनाले पनि सेयर बजार सतही भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसले सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने भन्दा पनि झन् कमजोर बनाउने देखिन्छ ।
वाम सरकार गठन भएदेखि लगातार घटिरहेको सेयर बजारमा सोमबार ‘सर्किट ब्रेकर’ नै लगाउनुपर्नेगरी गिरावट आएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विराटनगर पुगेर सेयर बजारमा लहडी लगानीकर्ता भनेको भोलिपल्ट बजार परिसूचक नेप्से करिब ५२ अंकले घटेको छ ।
सेयर बजार ५८ अंकले घट्यो
गत साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १७३ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार २३८६९ कारोबारबाट एक अर्ब ७२ करोड पाँच लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरका ४६ लाख दुई हजार छ सय ३० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३२.९९ प्रतिशत बढि हो । गत साता १७४ कम्पनीहरुको कारोबार भएको थियो ।
सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र युनाइटेड फाइनान्ससँगको संयुक्त आयोजनामा प्रदेश नं. ५ को दाङ र बुटवलमा क्रमशः चैत १ र २ गते ‘लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम’ आयोजना गरेको थियो ।
परिसूचक २७ अंकले र कारोबार रकम २८ प्रतिशतले घट्यो
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक गत साताभर करिब २७ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि करिब २८ प्रतिशतले कमी आएको छ ।